Hindiya labaad COVID-19 ayaa ka sii masiibo badan tii hore
Bogga ugu weyn » Wararka Booqashada Caalamiga ah » Wararka Safarka Hindiya » Hindiya labaad COVID-19 ayaa ka sii masiibo badan tii hore
Second Indian COVID-19 mawjad
Mr. Amitabh Kant, oo ah agaasimaha guud ee NITI Aayog, oo ah hay'ad ka fikirta siyaasada guud ee dowladda, ayaa maanta sheegay in mowjadda labaad ee India COVID-19 ay ka masiibo badneyd tii hore.
Agaasimuhu wuxuu sheegay in qadar ku filan oo tallaal ah la heli doono laga bilaabo Ogosto iyo wixii ka dambeeya.
Baahida loo qabo in la dhiso kaabayaasha isbitaalka, ilaha aadanaha, iyo xarunta ICU-da ee heerka hoose waxaa la tilmaamay inay fursad u tahay shirkadaha gaarka loo leeyahay inay dalka ka caawiyaan
Waxaa laga baqayaa in haddii mowjad saddexaad dhacdo, carruurta iyo dadka ku nool miyiga ay saameyn ku yeelan doonaan.
Mawjaddii labaad ayaa cariiri gelisay nidaamka caafimaadka in muddo ah, dowladduna waxay qaaday tallaabooyin taxane ah tan iyo markaas iyadoo si joogto ah hoos ugu dhacday tirada kiisaska firfircoon ee COVID-19.
"Waxaa sii kordhayay talaalka talaalka, waaxda gaarka loo leeyahayna waxay door muhiim ah ka ciyaareen maareynta masiibada waxayna bogaadiyeen dadaalada dowlada si la taaban karo," Mudane Kant ayaa yiri.
Isaga oo ka hadlaya “kal-fadhiga is-dhexgalka ee badbaadinta nolosha iyo hab-nololeedka,” oo ay soo qabanqaabiyeen Xiriirka Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha ee Hindiya (FICCI), oo ay si wada jir ah ula leeyihiin shirkadda martigelinta ee OYO, Mr. Kant ayaa bogaadiyay doorka waaxda gaarka loo leeyahay ee wadista tallaalka guud.
“Waxa laga yaabaa inay yaraato isu-dheelitirnaan la’aanta dalabku ee tallaalka inta lagu jiro Juun-Luulyo laakiin laga bilaabo Ogosto wixii ka dambeeya waxaa jiri doona tiro tallaallo ku filan oo la heli karo. Wixii intaa ka dambeeya, waa inaan awoodnaa inaan tallaalno qof walba gudaha Hindiya si sax ah taasna waa inay na caawisaa, ”ayuu raaciyay.